China Mini Picosecond Laser All Colour Tattoo Removal Carbon Peeling Machine ထုတ်လုပ်သူများ |Stelle
အမျိုးအစား-ND Yag လေဆာ / Picosecond လေဆာ
အကြံပြုချက်များ532nm၊ 1064nm၊ 1320nm
လုပ်ဆောင်ချက်-ရောင်စုံတက်တူးအားလုံးကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ကာဗွန်တက်တူး
အသေးစားနှင့် အစွမ်းထက်သော တက်တူးဖယ်ရှားရေး မှဲ့ဖယ်ရှားရေး 532 1064 1320 ကာဗွန်အခွံလေဆာ
1. Mini အရွယ်အစား၊ ပေါ့ပါးပြီး ပို့ဆောင်မှုတွင် အလွန်စျေးပေါသည်။
2. ရိုက်ချက်ပေါင်း 3,000,000 ကျော်ဘဝ။
3. Triple wavelength 1064nm၊ 532nm နှင့် 1320nm။
5. ရွေးချယ်စရာများအတွက် မတူညီသော လက်ကိုင် ၂ ခု။
5. တက်တူး ဖယ်ရှားခြင်း၊ မှဲ့ဖယ်ရှားခြင်း၊ တင်းတိပ် ဖယ်ရှားခြင်း၊ အရေးအကြောင်း ဖယ်ရှားခြင်း၊ ရောင်စုံ ဖယ်ရှားခြင်း၊
အသားအရေတင်းရင်းခြင်း၊ အသားအရေဖြူဝင်းလာစေခြင်း၊ အသားအရေပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း။
UK xenon မီးအိမ်
phi6တံ
532nm၊ 1064nm၊ 1320nm
10" TFT စစ်မှန်သောအရောင် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
90-130V၊ 50/60HZ သို့မဟုတ် 200-260V၊ 50HZ
nd yag လေဆာmini picosecond
Q-ပြောင်းထားသော လေဆာဖြင့် တက်တူးကို ဖယ်ရှားခြင်း 'photoacoustic effect' ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုသည်။တက်တူးရောင်ခြယ်ပစ္စည်းမှ လေဆာစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသောအခါ အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်ကို ထုတ်ပေးသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီဂရီ ထောင်ပေါင်းများစွာ။သို့သော် ဤမြင့်မားသောအပူချိန်သည် ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းမရှိသောကြောင့် 'ပြိုကျသည်'။၎င်းသည် ရောင်ခြယ်အမှုန်များ တစ်ဝိုက်တွင် ဖွဲ့စည်းရန် acoustic wave ကို ထုတ်ပေးသည်။ဤလှိုင်း၏ရလဒ်မှာ မှင်၏အမှုန်အမွှားများကို သေးငယ်သောအပိုင်းအစများအဖြစ်သို့ ကွဲအက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ရေး ယန္တရားတွေက ပိုကြီးတဲ့ တက်တူးအရောင်ခြယ်မှုနောက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဒီသေးငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲကုသမှုများသည် ကျန်မင်မှုန်များအားလုံးကို နောက်ဆုံးတွင် ပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိ တူညီသော 'ကွဲအက်ခြင်း' အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ခွင့်အတွက် မတူညီသော လက်ကိုင် ၂ ခုပါသော လှပသော ခရီးဆောင် ND Yag လေဆာစက်။
အကြံပြုချက်3ခုပါသော nd yag လေဆာလက်ကိုင်
ရိုက်ချက် ၃ သန်း၊ ယူကေ မီးအိမ်
nd yag လေဆာ၏ အရည်အသွေးမြင့် အစိတ်အပိုင်းများ
* Φ6တံပါရှိသော UK မီးအိမ်
* 4L ရေစည်ကြီး
* Korea မှတင်သွင်းသော ရေဇကာ
* ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ပရိတ်သတ်ကြီးများ
* နောက်ဆုံးပေါ် brushless DC ရေစုပ်စက်
532nmလှိုင်းအလျား- တင်းတိပ်များ၊ မျက်ခုံးတက်တူး၊ မအောင်မြင်သော မျက်လုံးလိုင်းတက်တူး၊ တက်တူး၊ နှုတ်ခမ်းလိုင်း၊ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း၊ အနီရောင်၊ အညိုနှင့် ပန်းရောင်နှင့် အလင်းအရောင် စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
1064nmလှိုင်းအလျား- တင်းတိပ်များနှင့် အဝါရောင်အစက်အပြောက်များကို ဖယ်ရှားရန်၊ မျက်ခုံးမွေးတက်တူး၊ မအောင်မြင်သော မျက်လုံးလိုင်းတက်တူး၊ တက်တူး၊ Ota ၏ မွေးရာပါ အမှတ်အသားနှင့် Nevus၊ အရောင်ခြယ်ခြင်းနှင့် အသက်အရွယ် အစက်အပြောက်များ၊ အနက်ရောင်နှင့် အပြာရောင်ရှိသော nevus၊ နီမြန်းသော အနီရောင်၊ ကော်ဖီပြင်းပြင်းနှင့် စသည်ဖြင့် နက်နဲသောအရောင်။
1320nmလှိုင်းအလျား- ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေခြင်း၊ ဝက်ခြံများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ အသားအရေ တင်းရင်းစေပြီး ဖြူဝင်းလာစေခြင်း၊ အသားအရေ ပြန်လည်နုပျိုခြင်း၊ အရေးအကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း။
ပါဝါ 1000mJ ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ပထမကုသမှုခံယူပြီးနောက် အလွန်သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ယခင်- IPL+SHR ဘက်စုံသုံး ဆံပင်ဖယ်ရှားရေး အလှပြင်စက်
နောက်တစ်ခု: 980nm လေဆာ Vscular ဖယ်ရှားရေးစက်
ခရီးဆောင် nd yag လေဆာ picosend လေဆာ 532nm 1064...
အသစ်ရောက်ရှိ။ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေဆာ picosecond/ las...
ရွေးချယ်စရာအတွက် APQ1 ndyag လေဆာ လက်ကိုင် ၂ လုံး
Nd Yag Nd Yag လေဆာစက် Q Switch Nd Yag Las...